आज मंगलबार गणेशजीको व्रत बसेर यसरी पूजा आराधाना गर्दा धन प्राप्ति हुन्छ – Naya Kura Daily
मंगलबारलाई धेरै कारणहरुले गर्दा अशुभ मान्ने गरिन्छ। यो दिनमा हिन्दू देवताहरू गणेश, दुर्गा, काली र हनुमानको पूजा आरधाना गरिन्छ ।
मंगलवार विशेषगरि मंगल ग्रहको प्रभाव रहेको कारण यसदिनलाई मंगलवार पनि भनेर चिनिन्छ। ज्योतिषशास्त्रकाअनुसार मंगल ग्रह ग्रहहरुको प्रमुख सेनापति भनेर परिचित छन्। त्यस्तै हिन्दु ज्योतिशास्त्र अनुसार मंगलग्रह धर्तिका पुत्र हुन्, तर तुलनात्मक रुपमा पृथ्वी भन्दा धेरै सानो भएको वैज्ञानिक तथ्यबाट पुष्टि छ।
यो पनि – यी समस्या भएका व्यक्तिहरूले खाँदै नखानुहोस् तिते करेला !
एजेन्सी । करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो । तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तिते करेला विष साबित हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले तिते करेलाको सेवन गर्नु हुँदैनः करेलामा भएको मोमोकेरिनले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँछ । बढी करेलाको सेवनले गर्भ तुहिनेसमेत डर हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा करेला खाँदा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ ।
यदि फर्टिलिटीसम्बन्धी औषधि लिइरहनुभएको छ भने करेला प्रयोग गर्दा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । करेलाको प्रयोगले फर्टिलिटीसम्बन्धी औषधिको प्रभावलाई कम गर्छ र रोगको मात्रा बढ्दै जान्छ । त्यसैले यस्तो समस्या भएको पुरुष र महिलाले करेला प्रयोग गर्नु हितकर हुँदैन ।पायल्सको समस्या छ भने पनि तितेकरेलाबाट टाढै रहनुस् । किनकि, तितेकरेलाको प्रयोगले पायल्सको समस्यालाई थप बल्झाउन मद्दत गर्छ ।
शल्यक्रिया गरेपछि पनि तितेकरेलाको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा करेलाको प्रयोगले रगतमा सुगरको मात्रालाई प्रभावित पार्छ । शल्यक्रिया भएको दुई हप्तापछि मात्र करेला प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । तितेकरेलाको अत्यधिक प्रयोगले कलेजोमा एन्जाइम्स बढ्न थाल्छ, जसले इन्फेक्सनको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले कलेजोको रोगबाट ग्रसित मानिसले करेलाको प्रयोग गर्नु हुँदैन । बढी करेला खानाले महिनावारीको समयमा अत्यधिक रक्तश्राव हुन सक्छ । त्यसैले महिनावारीको समस्या हुनेहरू करेलाबाट टाढा रहन जरुरी छ ।
करेलाको प्रयोगले मानिसमा सुगरको मात्रा सामान्यभन्दा पनि तल झर्न सक्छ । सुगरको मात्रा कम हुनेहरूले भने कहिल्यै पनि करेला खानु हुँदैन । एक वा दुवै कानका इअर लोब लत्रिन थालेमा बुज्नुपर्छ कि यो हर्ट डिजिजको समस्या हुन् सक्छ । किनभने, कानको नसा शरीरका थुप्रै अंगका नसासंग जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले मुटु सम्बन्धि नसामा समस्या आएमा कान लत्रिन सक्छ । यस्तो संकेत पाउननासाथ चिकित्सककहाँ जानुपर्छ ।
यदि तपाईको कानको आकार बिग्रन थालेको छ भने पनि यो ठूलो रोगको संकेत हुन सक्छ । कानको आकार बिग्रनु भनेको मिर्गौला सम्बन्धि रोगको संकेत पनि हो । दुवै कानमा लामो समयसम्म चिलाउने समस्या भएमा भने फंगल इन्फेक्सन हुनसक्छ । फंगल इन्फेक्सनले कानमा निकै दुखाईको अनूभूतिसमेत गराउँछ ।
Prevआज एकैदिन मलेसियाबाट १६ श’व नेपाल ल्याइयो
Nextपैसा लिएर जग्गा नदिने द’लाललाई महिलाले सडकमा दौडाइ दौडाइ चप्पलले कु’टिन्,- बनिन् सामाजिक संजालमा भाइरल
हाम्रो सौर्यमण्डलमा आइपुग्यो अर्कै ग्रहको प्रविधि ! के यो पिण्डमा एलियन आएका छन् ?